Ukuhlanza Inja YeSelf Service amahora angama-24 ngosuku - Geza Inja yaseMilan
Ngosuku lonke, ukufinyelela kokuzigeza kuvunyelwe kulabo abaphethe i-Wash Dog Card.
Izinsizakalo zobuchwepheshe zokunakekela inja yakho.
Ngenxa yenkonzo ye Ukugeza Inja YeSelf Service amahora angama-24 ngosuku inikezwe amandla yi Geza Inja a Milan, ukugeza nokunakekela isilwane sakho osithandayo kulula, kuyashesha futhi akubizi. Geza Inja unikezela ngezinsizakalo ezahlukahlukene zokunakekela abathembekile bakho umngani onemilenze emine ukuhlinzeka ngemikhiqizo namathuluzi asebenzayo enhlalakahleni yakho.
Ukugeza ne-Bath ye-24h: i-Spa yenja yakho eMilan
Nakekela inhlala-kahle yabazali bakho nginga kulula futhi kumnandi ngenxa yenkonzo ye- Ukuzigeza Kwesevisi iyasebenza ku Geza Inja a Milan. Lapha ayatholakala ngokuthembeka kwakho izilwane ezifuywayo amashubhu nemishini yokusebenza, kukhululekile futhi kuphephile, kuhlanzwe ekugcineni kokugeza ngakunye ukuqinisekisa ukuhlanzeka okuphezulu. Sibonga u geza ukuzisebenza ngokwakho kusebenza amahora angama-24 ngosuku sibonga ezisebenzisekayo ikhadi, ungageza inja yakho nganoma yisiphi isikhathi semini noma sebusuku, ngaphandle kwesidingo sokuletha imikhiqizo yokuhlanza noma ezinye izesekeli.
Ukuzilungisa Okusezingeni Elifanele: abasebenzi abangochwepheshe abatholakala ngenhlanzeko yesilwane sakho
Presso Geza Inja, ngezikhathi zokuvula thola abasebenzi abaqaphelayo nabaqeqeshiwe abakulungele ukunikela ngezinsizakalo ezinembe kakhulu ze- Ukujola uchwepheshe. Ama-opharetha anolwazi asebenza ngokukhulu ukunakekela nokunaka ukuqinisekisa ukuhlanzwa ngokuphelele kanye nensizakalo enembile eyakho fido. Ngaphezu kwalokho, isitolo sineqophelo eliphezulu kakhulu, ngenxa ye- uhlelo lokuhlanzeka con amanzi ahambayo we-ozonated nokusetshenziswa kwe- nanobubbles eqinisekisa izindawo eziphephile nezingahlanzekile.
Izinsizakalo zokuwashwa kwezinja, ukuhlinzekwa kwemikhiqizo yenhlanzeko kanye nemvelo ephephile: Geza Inja icabanga ngakho konke
Isitolo se Geza Inja inikeza ngezinsizakalo ezahlukahlukene zokunakekelwa kwakho umoba ezikhula ngokwandayo kulabo abanquma ukwenza kusebenze i- Geza Ikhadi Lenja. Ngenxa yaleli khadi elilula, uzoba nethuba lokufinyelela lonke uchungechunge lwezinsizakalo ezingeziwe. Phakathi kwalokhu, lokho kokukwazi ukusizakala nge- Ukuzihlanza ngamahora angama-24: ukuze ugeze inja yakho nganoma yisiphi isikhathi semini noma sebusuku, ngokuzimela okuphelele nangokukhululeka okukhulu. Eqinisweni, uzothola yonke imikhiqizo namathuluzi adingekayo ukwenza ifayili le- geza wenja yakho.
Ukuzihlanza ngokwakho, uhlelo lokuhlanzeka kwemvelo, ukuzilungisa ngobungcweti, ilondolo: konke kubongwa okukodwa ku-Wash Dog
Ngubani one- isilwane uyazi ukuthi kubaluleke kangakanani ukumnakekela, ukuhlinzeka ngezinsizakalo ezibalulekile njenge ukuzilungisa e geza. Geza Inja uphendula zonke lezi zidingo nezinye eziningi, futhi wenza kanjalo ngokukunikeza ikhadi elilula elizokuvumela ukuthi usebenzise kakhulu izinsizakalo ezinikezwayo.
La Geza Inja Ikhadi lingavuselelwa kumadivayisi azenzakalelayo abekwe ngaphakathi esitolo, ngaleyo ndlela linikeze insizakalo ezimele nephelele futhi likuvumele ukuthi ube nesitolo njalo ngaphansi kolawulo kanye ne-database etholakala njalo. Ubulula, ukuphepha, ukunethezeka nokuhlanzeka nazi izinsika ezizokuvumela ukuthi utotobise okwakho nsuku zonke. umngani onemilenze emine.
Ikheli: Nge-Gaetano Strigelli, 3
I-POSTAL CODE: 20137
Ucingo: 02 99241923
Umakhala ekhukhwini: 327 3188669
Ifasitela lesitolo: www., www.ishinmogano.com
Inombolo ye-VAT: 09396270960